Mụta iji efe ụgbọ elu ihe atụ - Modellpilot.EU
Home playlist Mụta iji efe efe
Mụta ihe eji efe efe, mụta ihe gbasara efe efe na PC, mụta ihe nkiri efegharị efegharị, ihe ngosi ụgbọ elu efe efe, mụta ihe atụ eji efe efe, mụta mgbagharị efe efe, mụta ịnya ụgbọelu, mụta ịnwe efe efe na simulata, mụta ihe atụ ụgbọ elu na PC, mụta ihe nlereanya efe efe, YouTube mụta efe efe, ihe nkiri efe ala ,
Na-achọ mgbe ọ bụla ị ga-efe efe ụgbọelu? Ikekwe ị chọpụtara ihe omume ntụrụndụ ahụ mgbe ị na-eleta ebe a na-ere ahịa, na magazin ma ọ bụ mgbe ị na-achọ ihe n'Internetntanet? Ugbu a, ịchọrọ ịmalite ọmarịcha egwuregwu a. Biko lee ihe ndị a anya:
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta ọdụ ụgbọ elu RC dị gị nso, ịntanetị bụkwa ezigbo isi iyi nke ozi ebe a.
Kedu ka esi achọta ọgbakọ?
Isi mmalite dị mma bụ ndepụta nke klọb na weebụsaịtị mkpakọrịta. Na weebụsaịtị DMFV ma ọ bụ DAeC ị ga-ahụ njikọ dị mkpa maka mkpakọrịta na mba Europe.
Gini mere iji sonye klọb?
N'ezie, enwere ọtụtụ ihe dị mkpa. N'ebe a, ị ga-ahụ ndị anya ụgbọelu nwere ahụmịhe nwere ike ịgafe ahụmịhe ha nwetara kemgbe ọtụtụ afọ, dịka ịmalite n'okporo ụzọ ahịhịa ma ọ bụ mkpọda siri ike. Ọtụtụ oge enwere ụlọ klọb na ogige klọb ma ọ bụ na enwere ebe a na-adọba ụgbọala. Clubsfọdụ klọb na-enye ohere ịnweta ebe a na ndị na-anya ụgbọelu nwere ahụmịhe ga-adụ gị ọdụ na nhọrọ, ntinye na ịrụ ọrụ nke ngwaike ma ị ga-amụta nka ị efe efe. Na klọb ị sonye na ndụ klọb dị iche iche.
Họrọ ụdị nke mbụ
You ga - achọ ịmalite iji Warbird 40-45, ụgbọ elu mara mma - ma ọ bụ nnukwu ụgbọ elu na - efegharị efegharị ma ọ bụ glider nwere nku nku mita 6, nke ọtụtụ nrọ? Chefuo ya! Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkwọ ụgbọelu nwere ahụmahụ, ịnwere ike iji ụgbọ elu ndị a tụrụ atụ. Mana ị ga-amalite site na obere ụgbọ elu. Dịka ọmụmaatụ na akwa-elu nwere nku nke 1,4 m na 1,8 m. Ọ bụrụ na ịhọrọ onye na-efegharị efegharị, nha kacha mma ga-adị n’agbata nku 1,5m na 2,5m. N'agbanyeghị ma ị họọrọ ụgbọ elu a kwadoro ma ọ bụ onye na-efegharị efegharị, anyị na-akwado ụdị "njikere ijiji" ịmalite, n'agbanyeghị na anyị ga-achọ ịkpọkọta ihe atụ ahụ n'onwe anyị. Na mbido naanị anyị nwere ọchịchọ ife. A na-atụ aro ka ndị mbido malite mbido ụlọ ha na klọb n'okpuru nlekọta. E nwere ụdị dị mfe n'ụba na ahịa. N'ihe banyere ụgbọ elu, e nwere Mentor, Kadett, Calmato, Ipanema, Nnukwu Mfe, U CAN FLY, ... N'ihe banyere ndị na-efegharị efegharị, ndị a bụ Easystar, Easyglider, Apha Beginner, ... Ndepụta enweghị njedebe.
Kedu ụdị injin?
Love hụrụ obere ndị ọrụ ụgbọ ala n'anya na anwụrụ ọkụ na mkpọtụ? Mgbe ahụ malite na engine n'etiti 4 cm³ na 6,5 cc. Igwe ndị a na-arụ ọrụ na methanol. More banyere nke a n'oge adịghị anya na Modellpilot.EU n'okpuru ndụmọdụ sitere n'aka ndị editọ. Love hụrụ ọrụ ahụ dị jụụ, enweghị anwụrụ ọkụ na mmanu mmanu mmanu na fuselage na nku? Mgbe ahụ, emere igwe eletrik maka gị. Uru nke engine combustion dị n'ime bụ na ụgwọ ọrụ na-adị ọnụ ala karịa oge dị iche na igwe eletrik (ịzụta batrị maka draịva).
A na-eche na ịchọrọ ịme RC na-efe efe. Formdị ụgbọ elu nke ọzọ bụ ụgbọ elu ejikọtara ọnụ, ụgbọ elu na-achịkwa okirikiri nke ejiri ụgbọelu ahụ duo ma na-eduzi ya site na eriri abụọ nke otu onye na-anya ya. Ogologo eriri ahụ bụ ihe dịka 15m. Planegbọ elu ahụ na-efe 100 m kwa mgbanwe. Ihe nkiri ahụ nwere oge buru ibu, mana ọ ka na-arụ ọrụ ụfọdụ ndị na-anụ ọkụ n'obi. Enwekwara ụgbọ elu n'efu, nke ihe nlereanya ahụ na-efe dị ka nha nke injin ya na ọnọdụ ihu igwe na-agbasasị. Enwere ike ịchọta akara ntanetị dị ọnụ ala (ụdị ihe atụ ụdị 4) na ọnụ ala. Agbanyeghị, anyị na-adụ gị ọdụ ka ịhọrọ ụdị ọwa A6 ma ọ bụ 8, n'ihi na ndị a dị mkpa maka ụdị mgbagwoju anya (flaps, airbrakes, gear retractable gear, etc.) Ga-ahọrọ a akara mode. Kacha nkịtị bụ ụdịdị 1 na 2.
Kpụrụ 1: Throttle na ailerons na mkpara aka nri, ịkwọ ụgbọ na omimi n’elu mkpara aka ekpe.
Kpụrụ 2: Omimi na trotul na mkpanaka aka nri.
Nhọrọ nke ụdịdị dabere na ike gị na njikwa ejiri na klọb gị. N'ikpeazụ, anyị na-akwado ịzụta otu njikwa akara nke ama ama, biko egbula akara ọnụ ala. Hụ ụdị ụdị ndị ọkwọ ụgbọelu ndị ọzọ na-eji, nke a bụ ụzọ dị mma iji mee nhọrọ ziri ezi.
Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - Omume ofufe - Modellpilot.EU
Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - Angle nke agha, laminar ka eruba eruba, serrated gbalaga
Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - Basics nke buoyancy: static, ike buoyancy
Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - Basics of buoyancy: static, ike buoyancy
Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - Okwu mmalite na isi na ụzọ aghụghọ
RC ọzụzụ ikuku
[Mkpokọta: 441 Nkezi: 5/ 5]